Ithegi: peter koeppel | Martech Zone
Ithegi: peter koeppel
Kukuthini ukubhala ngokuPhendula ngokuthe ngqo? Ungayibhala njani ikopi eguqukayo
NgoLwesine, Septemba 6, 2018 NgoLwesithathu, Septemba 5, 2018 Douglas Karr
Inqaku eliqhelekileyo alinakuyenza. Ndiyaqhubeka nokumangaliswa njengoko ndikhangela izihloko ezinomdla ngokukhangela nakwintlalontle kodwa xa ndiqala ukufunda inqaku, liyadika kwaye alinalwazi. Ukuba wenza amaphepha amabini okufika kunye nokunikezelwa okufanayo, ndiyakuqinisekisa ukuba enye ebhalwe ngumbhali onetalente iya kugcina ingqalelo ethe kratya. Kwinqaku elisecaleni, ndisanqwenela ukuba ngumbhali omkhulu.
Kukho utshintsho olwenzekayo phakathi kokuthengisa kunye nokuthenga kwi-Intanethi, kodwa andiqinisekanga ukuba nabani na uyayiqonda indawo esiya kuyo. Ukhuphiswano olunobundlongondlongo kunye nokunikezelwa simahla kokuthumela ngenqanawe kulungile kubathengi kodwa baqhuba ishishini kwiinkampani ze-ecommerce. Kwangelo xesha, abathengi bayakuthanda ukubonisa igumbi kwaye bachukumise kwaye bazive iimveliso abafuna ukuzithenga. Omnye umqobo kwinkampani ye-ecommerce emsulwa linani elikhulayo lamazwe asebenzisa irhafu yokuthengisa